व्यक्तिगत ब्रान्डि:: कसरी मेरो बारेमा पृष्ठ लेख्ने Martech Zone
एन्ड्र्यू वाइज मा वास्तव मा गहन लेख लेखेको छ मेरो बारेमा पृष्ठ निर्माण गर्न कसरी परम मार्गनिर्देशन तपाईले विस्तृत रूपमा जाँच गर्नु पर्छ। लेखको साथसाथै, उनले एउटा इन्फोग्राफिक विकास गरे जुन हामीले तल साझेदारी गरिरहेछौं जसले स्वर र आवाज, उद्घाटन वक्तव्यहरू, व्यक्तित्व, लक्षित दर्शकहरू र अन्य आवश्यकताहरूलाई कभर गर्दछ।
मलाई यी चीजहरूमा मेरो दुई सेन्ट थप्न मन पर्छ, त्यसैले यहाँ जान्छ। म तपाईको व्यवसायको रूपमा वा व्यक्तिगत रूपमा तपाईको सुविधा क्षेत्र भन्दा टाढा जानको लागि प्रोत्साहित गर्दछु। म धेरै धेरै मानिसहरूलाई चिन्छु जुन आफैंमा कुरा गर्न मनपर्दैन, आफैले खिचेका फोटोहरू मनपर्दैन, र भिडियो वा आफैंको अडियोलाई तुच्छ ठान्दछु। सायद उनीहरू पनि विश्वास गर्छन् कि यो अभ्यास नार्सिस्टिस्टिक छ। म प्राय: सामाजिक मिडियामा त्यस्तो टिप्पणीहरू देख्छु।
मेरो प्रतिक्रिया यहाँ छ: मेरो बारेमा तपाइँको लागि पृष्ठ हैन!
सेल्फीहरू, स्पिकिंग भिडियोहरू, पेशेवर पोट्रेटहरू, र तपाईंको विवरण तपाईंको दर्शकहरूको लागि हो। यदि तपाईं एक आश्चर्यजनक व्यक्तिगत र धेरै नम्र हुनुहुन्छ… तपाईंको मेरो बारे पृष्ठ प्रतिबिम्बित गर्न छ। पक्कै पनि, यो सबको लागी अनौंठो लाग्छ कि तपाईं नम्र हुनुहुन्छ। तर यदि तपाईं नम्र हुनुहुन्छ भने, कसैलाई कसरी थाहा हुने छ? के तपाइँ व्यक्तिगत रूपमा प्रत्येकलाई भेट्न तपाइँको नम्रता देख्न पर्खदै हुनुहुन्छ? वा तपाईंको नम्रता बोल्नको लागि अरूहरू पर्खनुहुन्छ? यो हुन गइरहेको छैन।
यदि तपाईंको लक्ष्य तपाईंको स्थानमा अधिकार र नेतृत्व निर्माण गर्ने हो भने, तपाईको सर्वश्रेष्ठ भिन्नता तपाई हुनुहुन्छ। यो तपाईको शिक्षा, तपाईको कार्य ईतिहास होईन, यो तपाई हुनुहुन्छ! यो तपाइँ सबैलाई बताउन दिनुहुन्छ किन तिनीहरू तपाईंसँग काम गर्नु पर्छ। व्यक्ति मानिससँग काम गर्न मनपराउँछ जससँग तिनीहरू काम गर्न चाहन्छन्। खरीद निर्णयहरू प्रायः भावनात्मक हुन्छन् र निर्णय तपाईको सम्भाव्यताले तपाईलाई कत्ति राम्ररी भरोसा गर्दछ र तपाइँको पेशा बीचमा एक अधिकारीको रूपमा तपाइँलाई पहिचान गर्दछ।
दुबै खोजी ईन्जिन प्रयोगकर्ताहरू र साइट आगन्तुकहरूलाई उनीहरूको सबै कतारहरू प्रदान गर्ने - भाषणहरू तपाईंले गर्नुभयो, नेताहरू जुन तपाईंसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, पुस्तकहरू जुन तपाईंले लेख्नु भएको छ, र तिनीहरूलाई व्यक्तिगत सन्देश पनि आवश्यक छ।
साइड नोट: म पनि दोषी छु! म मेरो बोलीको बारेमा हाम्रो कम्पनी साइटमा समर्पित पृष्ठ निर्माण गर्न वर्षौं देखि मेरा खुट्टा तान्दै छु ... तर एन्ड्र्यूको यो सल्लाहले मलाई यो कार्य गर्न प्रोत्साहित गरिरहेछ!
टैग: मेरो बारेमापृष्ठको बारेमाएन्ड्रु बुद्धिमान्व्यक्तिगत ब्रान्डिङव्यक्तिगत पृष्ठ
कसरी 3D प्रिन्टि Technology टेक्नोलोजी हाम्रो भविष्य परिवर्तन हुनेछ
अप्रिल 22, 2016 मा 4: 25 PM
यो महान सामान हो।
ती व्यक्ति जो आफ्ना शौकहरू र चासोहरू प्रकट गर्ने बारेमा सशंकित छन् किनकि उनीहरू अव्यावसायिक देखिन चाहँदैनन्, म यो भन्छुः
यो व्यावसायिकता को बारे मा छैन यो को बारे मा समूह, आउट-समूह गतिशीलता।
यदि तपाईंको पाठकले तिनीहरूको समूहभन्दा बाहिरको अवलोकन गर्दछ भने उनीहरूसँग तपाईंतर्फ बढि शत्रुतापूर्ण स्वभाव हुनेछ।
तपाईंको जीवनको बारेमा सानो बिटहरू प्रकट गरेर, जस्तै बच्चाहरू राखेर, दौडेर, तपाईंको मेक्सिकन खानाको प्रेम तपाईं भित्र-भित्र गहिराइमा सर्नुहुनेछ जहाँ मानिसहरूले तपाईंलाई अधिक अनुकूल प्रकाशमा देख्नेछन्।
यो हेलो प्रभाव जस्तै छ।
अप्रिल 25, 2016 मा 4: 59 एएम
मेरो विचारमा उत्तम समाधान भनेको आफैलाई विश्वासिलो व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। व्यक्ति स्मार्ट, सांस्कृतिक र ईमानदार ब्यापार व्यक्तिको साथ व्यापार गर्न मन पराउँछन्।
फेब्रुअरी १,, २०११ 7:१:2017 अपराह्न
मैले सम्भावित ग्राहकहरूसँग मेरो मनपर्ने रेस्टुरेन्टहरू साझेदारी गर्ने आधारमा धेरै सम्झौताहरू बन्द गरेको छु।